AirPlay 2 iyo HomeKit waxay bilaabayaan inay gaaraan LG TV-yada 2018 | Waxaan ka socdaa mac
Shaki la'aan tani waa mid ka mid ah wararka aadka loo filayo ee isticmaalayaasha arkay sida LG uga tagtay telefishannadooda 2018 cusbooneysiinta ka dhigtay inay la jaan qaadaan AirPlay 2 iyo HomeKit. Markii dambe shirkaddu dib ayey uga noqotay oo waxay ku dhawaaqday inay la jaanqaadayso adeegyadan Apple.
Bogga shabakadda 9To5Mac Warku wuu dhawaaqayaa in kasta oo cusbooneysiintu ay ku imanayaan qaab jaahwareer ah, adeegsadayaal badan ayaa haddaba haysta nooc cusub oo ka mid ah LG sannadkaas waxayna arkeen iswaafajinta AirPlay 2 iyo HomeKit.
Daawashada Mac-gaaga LG ama iPhone-ka, iPad-ka, iwm. Waa suuragal in loo mahadnaqo is-waafajintaas lala leeyahay AirPlay 2, waxaan sidoo kale maareyn karnaa daaridda iyo deminta TV-ga, kor u qaadista ama hoos u dhigista codkeeda mahadsanid HomeKit. Mabda 'ahaan, sheekooyinkan cusub waxaa lagu dhaqangelin doonaa dhammaan noocyada laga bilaabo sannadkan 2018 iyo wixii ka dambeeya.
Waxa ugu muhiimsan kiiskan ayaa ah in la cusbooneysiiyo softiweerka taasna xiriir internet ayaa looga baahan yahay. Marka lagu xiro shabakada, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan galno goobaha TV-ga oo aan hubino noocyada cusub ee la heli karo Marka aan TV-ga cusbooneysiino nooca ugu dambeeya, waxaad horayba ugu raaxeysan kartaa AirPlay 2 iyo HomeKit. Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso buug-gacmeedka ama aad la xiriirto astaanta lafteeda haddii aanan hubin inuu telefishankeennu la jaan qaadayo Sikastaba xeelad yar ayaa ah inaad ka raadiso barnaamijka Apple TV barnaamijyadaHadday muuqato, waa la jaan qaadi karaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » AirPlay 2 iyo HomeKit waxay bilaabeen inay yimaadaan TV-yada LG-ka ee 2018
GIMP wuxuu gaarayaa nooca 2.10.22 iyadoo lala kaashanayo taageerada faylasha HEIC